निदाएको बेला एेठन हुन्छ ? तपाईं निद्रामा हुनुहुन्छ र तपाईंलाइ सासै फेर्न गाह्रो हुनेगरी कसैले दबाइरहेको छ ? कतै तपाईलाई यस्तो त भएको छैन ? – Ujyaalo Patrika
निदाएको बेला एेठन हुन्छ ? तपाईं निद्रामा हुनुहुन्छ र तपाईंलाइ सासै फेर्न गाह्रो हुनेगरी कसैले दबाइरहेको छ ? कतै तपाईलाई यस्तो त भएको छैन ?
एजेन्सी । तपाईंलाइ कहिलेकाही यस्तो अनुभव भएको छरु तपाईं निदाइरहेको भएको छ तर वरिपरी के भैरहेको छ सबै निद्रामै सुन्न सक्नुहुन्छ ? के तपाईंलाइ यस्तो महसुस भएको छ की तपाईं निद्रामा हुनुहुन्छ र तपाईंलाइ सासै फेर्न गाह्रो हुनेगरी कसैले दबाइरहेको छ ?
के हो ऐठन ? नेपालीमा ऐठन भनेको के हो त ? त्यसको बारेमा यहाँ केही बैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन । ऐठन भनेको अस्थाई रुपमा निदाउदा आफ्नो शरीर चलाउन र बोल्न नसक्नु हो ।
यसको कारणः रातमा तपाईको शरीरले तपाईलाई निन्द्रामा हिड्न बाट रोक्नको लागि एउटा अजझष्अब िबनाउछ र तपाईंको दिमाग तपाईको शरीरको सहकार्यमा निदाउछ । तर यदि तपाईं केही मानसिक तनाब या दिमागमा निकै कुरा खेलाउदै निदाउनु हुन्छ भने तपाईको दिमागको एउटा सानो भाग बिउझन्छ र शरीर चलाउन खोज्छ तर शरीरले बनाएको त्यो अजझष्अब िले हामीलाई उठ्न दिदैन । त्यसैकारण एठन हुने गर्छ ।
यसलाई रोक्नको लागिः १. मानसिक तनाब लिएर बिस्तारमा नजानु होला । यदि केहि मानसिक तनाब छ भने नुहाएर सुत्नु राम्रो हुन्छ । २. सुत्नु अघि मोबि, दूध या प्रयाप्त पानी पिएर निदाउनुले एठन रोक्न सक्छ । ३. सबै भन्दा राम्रो केही पढ्दै निदाउनु हुन्छ प्राय मान्छेहरु पढ्दा निदाउछन र दिमाग पनि अन्तै केन्द्रीत हुन्छ ।
Previous बैज्ञानिकहरुले अन्तरिक्षमै उमारे मुला (तस्वीरसहित)
Next त्यो पुरुष संगको मेरो पहिलो रात . .